Blog – Page2– Mero UK
अन्तिम भेट! यस्तो लाग्दथ्यो, जमीन माथिको अदृश्य सतहमा लगभग तैरिँदैथिई ऊ । शरदीय मन्द पवन, हृदयलाई काउकुती लगाउँदै वहने गर्दथ्यो, पानी परिहाल्ला जस्तो चाहिँ थिएन, तर वातावरण रुझे-रुझेको स्नीग्ध भएको थियो र यस्तो हिजो, अस्ति, झन् अस्ति पक्कै थिएन । उत्साह रोमाञ्चक अनुभूति लिएर छातीबाट ‘बेलगाम’ अँगालोभरि फैलिएको थियो । किट्टी हाँस्दै आई, जून जस्तो …
मृग तृष्णा Read More »
आश्चर्य! म शून्य भएको छु, यस्तो लाग्छ, मेरोमा अब शून्यताबाहेक केही छैन । बोलेर नसकिने परिमाणमा गन्थनहरू नभएका होइनन्, हेरेर थाक्नै नसकिने परिणामका घटनाहरूका परिवृत्ति नभोगिएका होइनन्, तर पनि म शून्य भएको छु, जस्तो मभित्र शून्यताबाहेक केही छैन । सिर्जनशीलता, जस्तो कुँजो भएर चेतपटमा कतै थन्किएको छ । म गन्थनहरूलाई प्रसङ्गहरूमा ढाल्दै सोच्न थाल्छु, कथनीका …
बेलायतमा नेपालीको पीडा Read More »
यो एउटा अर्धविराम मात्र थियो, तर त्यसको अन्तराल भने लामो हुन गयो र यस अन्तर्निहित अन्तरालभित्र दोस्रो कडीको समन्वयमा एउटा अर्को अन्योल इकाइको पृष्ठभूमि एक तमाससँग जम्यो बीचमा कि सर्वप्रथम त्यसलाई प्रसँगसँग पृथक राख्न खोज्ने जमर्कोले नै कुरा लम्बिईन गएको हुन सक्छ । उनीहरुले भर्खरै मलाई जमिनमा पछारेकाथिए र एउटा उनीहरुकै लागि कर्णप्रीय अट्टहासमा मग्न …
उकेराले थामेको खाली मन Read More »